मे २९ सन १९५३ का दिन तेन्जिङ्ग नोर्गे शेर्पा र न्यूजिल्याण्डका महुरी व्यवसायी एडमन्ड हिलारीले संगै संसारको अग्लो हिमालको चुचुरोमा पाइला राखेका थिए । एभरेष्ट, चोमोलङवा वा सगरमाथा अंग्रेजी, तिब्बती र नेपाली भाषामा जे नामले चिनिए पनि विश्वले यसलाई तेस्रो धु्रव मान्दथ्यो । तेन्जिङ्गले संयुक्त राष्ट्रसंघ, नेपाल, भारत र वेलायतको झण्डा यो चुच्चोमा फरफराएका थिए भने हिलारीले यो विश्व इतिहासको तस्विर खिचेका थिए । तर खिचिएका तस्विरमा उनको तस्विर थिएनन् जसले अरु सर्वसाधारणलाई हिलारी सामु प्रश्न राख्न वाध्य पारिदियो । किन हिलारी स्वयमको तस्विर शिखरमा खिचिएन ?
के उनी सगरमाथाको टुप्पोमा पुगेनन् त ? उनले यस्ता प्रश्न माथि यति कुरा भने कि तेन्जिङ्ग फोटोग्राफर होइन र सगरमाथाको शिखर तेन्जिङ्गलाई फोटो कला सिकाउने ठाउ“ पनि होइन । हिलारीले नेशनल जोग्राफिको जुलाई सन् १९५४ को अंकमा भनेका छन् जब उनी सगरमाथाको टुप्पोमा पुगे उनले अझै कतै चढ्न बाकी ठाउ छ कि भनि नियाल्न पुगे । अनि कतै त्यो भन्दा उचो भूभाग देखेनन् किनकी उनी र शेर्पा तेन्जिङ्ग जहा“ पुग्नुपर्ने हो त्यहा पुगिसकेका थिए । अब चढ्न बाकी केही थिएन ।
हिलारी र तेन्जिङ्ग भन्दा २९ वर्ष पहिले आरोहीद्धय म्यालोरी र इर्भाइन तिब्बती भूमिबाट सगरमाथा चढ्दा उनीहरु २८ हजार फिट पुगेको तथ्य त जिवितै थियो तर उनीहरुले सगरमाथा चढे वा चढ्न सकेनन् त्यो सत्य आउन सकेको छैन र थिएन । तर एडमन्ड हिलारीले शिखरमा उनीहरुको केही पनि चिनो भेट्टाउन सकेनन् जसको कारण उनीहरुले शिखर चुमेनन् भन्ने अडकल काटियो र हिलारी जो व्रिटिस आरोहण दलको सदस्यको रुपमा चढेकोले उनकै समुह पहिलो शिखर चुम्न सफल समुह बन्यो ।
संयोगवस १९५३ जुन २ का दिन बेलायतमा रानी एलिजावेथ दितियको राज्यभिषेक थियो । हिलारीको आरोहणको दुःख, सुख बनेर बेलायतको त्यो महत्वपूर्ण दिनमा विश्वभर रेडियोमा गुन्जिरहेको थियो । हिलारीले पनि त्यो खबर सगरमाथाको बेश क्याम्प तिरै औपचारिक रुपमा सुने । अनि उनी भन्छन् ः तब मात्र म विश्वस्त भए“ । औपचारिक घोषणा उनको कानमा नपरिन्जेल उनी र तेन्जिङ्ग आफैलाई थाहा थिएन की उनीहरुले सगरमाथा चढे वा चढेनन् ।
नेशनल जोग्राफीको जुलाई १९५४ को अंकमा उनको आरोहण दिनको छोटो अनुभव यस्तो छ ः मैले अक्सिजन बन्द गरेर माक्स हटाउदा २९ हजार फिटको उचाइको दुब्लो हावामा मेरो श्वास प्रश्वास अलिक बढ्यो तर त्यति ज्यादा असुविधा नहुने गरी । मैले ओभानो आफ्नो सर्टको भित्रपट्टि जतन गरी राखेको क्यामेरा बाहिर झिके जुन आखाले देखेभरीका तलका लहरै हिमालहरुको तस्बिर खिच्न आवश्यक थियो यदि हामीले हामी टुप्पोमा पुगेको स–प्रमाण दिनु छ भने । मैले तेन्जिङ्गको हिउ काट्ने बन्चरोमा झुण्ड्याइएका संयुक्त राष्ट्रसंघ, बेलायत, नेपाल र इन्डियाको झण्डा लिएको तेन्जिङ्गको फोटो लिए । तेन्जिङ्गले मेरो फोटो पनि खिच्दो हो त कस्तो राम्रो हुदो हो । ऊ सद्गुणहरुले भरिएको शेर्पा हो तर पनि उ फोटोकला जान्दैन र मलाई लाग्छ सगरमाथाको टुप्पो उसलाई यो कक्षा संचालन गर्ने उत्तम ठाउ होइन ।
हामीले म्यालोरी र इर्भाइन यहा हामी अघि आइपुगेको कुनै संकेत भेटेनौं । त्यहा केही पनि संकेत छैन यद्धपि मैले उनीहरु लगायत अन्य कैंयौं पर्वतारोहीहरुले प्रयोगमा ल्याएको नर्थकोल र नर्थइष्टरिजतिर आफ्नो नजर पु¥याए, अनि मैले क्यामेरा आशा गरौं कसैले नचढेको मकालु अनि टाढा आकाशमा कन्चनजंघा र चोयु तिर मोडे जुन ताराहरुझैं चम्किरहेका थिए यत्रतत्र । हिउमा खोस्रिएर तेन्जिङ्गले सानो खाल्डो बनायो र भगवानलाई केही उपहारहरु चढायो । जुन बौद्ध धर्मालम्बीहरुले यो उचाइमा बास गर्छन् भन्ने विश्वास राख्छन् । सानो एउटा निलो सिसाकलम जो उसको छोरीले दिएकी थिई र केही मिठाई र विस्कुट । मैले यो उपहारको नजिकै जिजस अंकित क्रस राखे जुन साउथकोलमा साथीसंग पाएको भन्दै जोन हन्टले मलाई सुम्पिएका थिए ।
तल झर्ने समय अब भयो भन्ने ठानेर मेरो अक्सिजन माक्स फेरी मुखमा जोडे र आफैलाई धन्य ठान्दै अक्सिजन चुस्दै तल झर्नुपरेकोमा कत्ति पनि तितो नराखी झर्न लागें । हाम्रो दुवैको हाउभाउले जनाउथ्योकी हामी दुवै थकित थियौं ।
हिलारी र तेन्जिङ्गको पहिलो सफल आरोहण पछि अब सगरमाथामा अरु थुप्रैका आखा पर्न थाल्यो । पहिलो महिलाको रुपमा जुनको तवाई (जापानी नागरिक) अनि विना अक्सिजन बोटल रेनोल्ड मेस्नर (जर्मन नागरिक) हुदै सगरमाथामा दुवै आखाको ज्योति गुमाएका पर्वतारोही एरिक सम्म पुगे । शेर्पाहरुको आफ्नै इतिहास र सम्बन्ध छ सगरमाथा संग । २१ पटक आरोहण गरेका आप्पा शेर्पा या छोटो समयमै पुग्ने पेम्बा दोर्जे अनि १६ वर्षे तेम्बाछिरी ।
सगरमाथा रेकर्ड राख्ने थलो मात्र बनेन यो धनीहरुको लागि सोखको केन्द्र पनि बन्यो । एडमन्ड हिलारीले आफ्नो जिवनकालभरि सगरमाथाको व्यवसायिक अर्थात नाफा आर्जन गर्ने हेतुले आरोहण संचालन गर्न नहुने भनेर अडान त राखे तर सगरमाथा कसैले रोक्न नसक्ने गरी व्यवसायिक आरोहणमा फस्यो । नेपालका तात्कालिन सरकारहरुले सगरमाथालाई आय आर्जनको गतिलो भाडो बनाए । महंगो परमिट र महिनौको समय र सामथ्र्यको जोड घटाउले प्रत्येक आरोही सगरमाथा चढ्न जो वेशक्याम्प पुग्छन्, सवै सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नपर्छ भन्ने सो भ्रम आरोहीहरुमा बन्न पुग्यो । त्यसैले रेकर्डले यो देखाउछ कि प्रत्येक ४ आरोहीमा १ जनाको सगरमाथा आरोहणमा ज्यान जाने गरेको छ ।
सगरमाथा लगायत अन्नपूर्ण, धौलागिरी र अरु थुप्रै हिमालहरुको आरोहणको कथाहरु निकै मार्मिक छन् । त्यो मध्ये सन् १९९६ साल पनि सगरमाथा आरोहणको इतिहासमा एउटा असामान्य वर्षको रुपमा दर्जित छ । रब हल र स्कर्ट फिस्चर न्युजिल्याण्ड र अमेरिकी नागरिक जो संसारभरिका साहसिक आरोहीहरुलाई आफ्नो कम्पनी एडभेन्चर कन्सल्ट्यान्ट र माउन्टेन म्याडनेस मार्फत सगरमाथा चढाउने काममा लागेका हुन्छन्, जुन उनीहरुको व्यावसाय हो । तर अफसोच, मे १०, १९९६ का दिन उनीहरु दुवैको सगरमाथा आरोहणका क्रममा दुःखद मृत्यु हुन्छ । यी निकै अनुभवि दख्खल र आफै पर्यटकहरुलाई सगरमाथा आरोहण प्याकेज बेच्ने आटिला नेतृत्वकर्ताको सगरमाथामा भएको विलय जसलाई जोन क्राकाउरले इन्टु द थिन इयर मार्फत बाहिर ल्याएका हुन् ।
जोन क्राउकर स्वयमले आफ्नो पुस्तकको क्लाइमेक्स र अन्त्य यो हुन्छ भनेर कल्पना गरेका थिएनन् होला सायद जहा“ आफु स्वयम पात्र र लेखक बनेर सहयात्रीको मृत्यु पुस्तकमा लेख्नुपर्ने वाध्यता उनलाई आओस्, अर्नेस्ट हेमिङ्गवेयको फेयर वेल टु आम्स झै । हिजो सम्म वेश क्याम्पमा जसले मृत्युबाट वच्न आरोहणका सुत्रहरु सिकाउथ्यो उसैलाई गुमाउनु पर्दाको समिक्षामा कयौं पाना खर्च गर्न वाध्य पार्यो जोन क्राउकर लाइ यस पुस्तक ले। रब हल जो बाच्न सक्थे तर आफ्नो आरोहण दलका सदस्यको सुरक्षालाई आफ्नो भन्दा माथी राख्दा उनको त्यो आरोहण नै अन्तिम बन्यो । इन टु द थिन इयर रब हल र स्कट फिस्चरको कर्तव्य र त्याग मिसिएको महत्वपूर्ण आरोहणको कथा हो जसलाई जोन क्राउकरको शक्तिशाली कलमले विश्वभरी पु¥यायो । अरुलाई टेकेर आफु माथी जाने मात्र होइनकी मौकामा अरुलाई आफुमा टेकाएर माथी पु¥याउनु पर्छ भन्ने त्यागको कथा हो ।
यसै पुस्तकको सत्यकथा माथी बनेको पछिल्लो अमेरिकी फिल्म एभरेष्ट १ हप्ता अघि राजधानीको सिभिल मलमा हेर्दै गर्दा जब रब हलले २९ हजार फिटको केही तलबाट उसको वेश क्याम्प सहयोगी हेलेन मार्फत स्याटल्याइट फोनमा उसको घरमा रहेकी श्रीमती लाई फोन गर्दै गर्दा थ्रिडी फिल्ममा लगाइने पातलो कालो चस्मा भित्रबाट धेरै दर्शकहरुले आशु झार्दै सुक्क सुक्क गर्दै थिए । रब हल आफ्नो टिमका आरोहीहरुको सुरक्षाको लागि आफै हिउ आधीको शिकार बन्दै थिए । जिवन र मृत्युको मध्य भागबाट अझ पर पुगेर मृत्युको नजिक पुग्दै थिए रब हल । अनि यही समय उनको अन्तिम सम्पर्क हुदै थियो श्रीमती संग टेलिफोनमा । मृत्युको मुखैमा पुगेको परिवारको सदस्यले उसको जहानलाई व्यक्त गरेको माया र अन्तिम विदाई, अनि आफ्ना सहयोगी र साथीहरु गुमाएर बेचैन फर्किएका लेखक जोन क्राउकर अनि हात र खुट्टा गुमाएर फर्किएका अरु आरोही, जिवनमा मृत्युसंगको संघर्ष र जिवनप्रतिको लोभ, मोह अनि नचढेर पनि हुने तर नचढी नहुने त्यो कठोर सगरमाथाको पहाड सबै इन टु द थिन इयर भित्रका रहस्यहरु हुन् जसलाई एभरेष्टमा उतारिएको छ ।
प्रकृतिसंग बाहुवलिहरु हारेको एक दिन हो मे १०, १९९६ । तर यी हार र जितको कथाले हिमाल चढ्ने, चढाउने र बेच्ने सबै सरोकारवाला हरुलाई एउटा पाठ अवश्य सिकाएको छ । एउटा देशले राजश्वको लागि हिमाल बेच्छ जस्तै नेपाल, शेर्पा नुनको लागि हिमालमा बेचिन्छन् अनि सबै कुरा किन्न सकेपनि एउटा आरोहीले नया जिवन किन्न सक्दैन भने हिमाल बेच्नुको औचित्य के त ? हिमाल कहिले सम्म बेचिरहने ? सगरमाथामा वर्षौ भइरहेका अनुत्तरित मृत्युका उत्तरहरु स्वयम स्वर्गीय एडमन्ड हिलारीलाई पनि के थाहा होला र ? हिमालहरुको बढ्दो व्यवसायीकरणले यो देखाउछ कि आरोहीहरु सगरमाथा चढ्दै छन् वा उनीहरुको इगो ? यस्तै प्रश्नहरुको उत्तर स्वयम आरोहीहरुलाई नै थाहा होला ।